Nihaona manokana izahay mialoha ny Vovonana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Mey 2019 3:32 GMT
(Lahatsoratra nivoaka tamin'ny volana Jona 2012)
Tao anatin'ny telo andro mialoha ny nanombohan'ny Vovonana Global Voices 2012, manodidina ny 160 ireo mpanoratra, toniandahatsoratra, mpandika teny sy ny hafa izay mandray anjara amin'ny fanodinana ny Global Voices isan'andro no nanao fivoriana anatiny manokana. Vondrom-piarahamonina an-tserasera an-jatony izahay, ary raha tianay ny miara-miasa amin'ny endrika virtoaly dia zava-dehibe ny fihaonana mivantana isaky ny roa taona. Mitondra olona maro araka izay azonay atao izahay mba hisolo tena ny firenena maherin'ny 60.
Hitatitra momba ny fivoarana farany ho an'ny Global Voices Advocacy , Rising Voices , Lingua, ary ny efitra famoaham-baovaon'ny Global Voices ny ampahany samihafa amin'ny ekipa. Ary hanamora ny adihevitra momba ny sasany amin'ireo tanjona fototra sahanina ihany koa .
Ahoana ny momba hoavin'ny vondrom-piarahamonin'ny mpandika teny an-tserasera izay mitombo haingana? Ahoana no ahafahana mitantana ny fitomboana ao anatin'ny fikambanana kanefa sady mihazona ny fifandraisana misy eo amintsika samy isika ihany? Ary inona no tokony ho paikadin'ny fisoloana vava ho an'ny aterineto izay manome ny fahalalahana miteny?
Ampahany amin'ireo fanontaniana izay hodinihina ihany ireo. Sambany tamin'io taona 2012 io no nanombohana ny resaka nifanaovana mialoha ny fivoriana tao anaty andiana vondron'ekipa an-tserasera natolotry ny mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina. Vondrona miisa 50 teo ho eo no nahavory olona nanerana ny vondrom-piarahamonina ary nampiasa mailaka, fanadihadiana an-tserasera, sehatra fifanakalozan-kevitra, Google docs, ary fitaovana isankarazany an-tserasera mba hamaritana ny fizotry ny adihevitra.
Ny iray amin'ireo lafiny mahafinaritra mahakasika ny Global Voices – ary ny antony mahatonga ny Vovonana ho zava-dehibe amin'ny asanay – dia ny fitarihan'ny vondrom-piarahamonina ny fikambanana sy ny efitra famoaham-baovao ary ny fanoloran-tenan'ny mpilatsaka an-tsitrapo maro miasa mafy sy ireo mafana fo amin'ny fampitam-baovaon'olon-tsotra. Hitantsika fa maro tamin'ireo soso-kevitra no lasa zava-misy avy eo raha manao jery todika ny lahatsoratra avy amin'ny Vovonana tany Delhi teo aloha tamin'ny taona 2006 avy amin'i Rebecca MacKinnon isika. Indraindray sarotra ny mamaritra marina hoe avy aiza no hivoahan'ny hevi-baovao, saingy fantatsika fa manentana sady manampy ny Vovonana. Miara-miasa amin'ny zavatra maro isika, ary samy mifanome aingam-panahy mba hampivelatra hevitra izay mampisy akony any amin'ny firenena misy antsika ihany koa.
Niroso izahay raha vantany vao vita ny fivoriana anatiny nataonay ary vonona ho an'ny Vovonana Global Voices 2012 ho an'ny daholobe. Izany no fotoana nanombohanay niresaka momba ny fampahalalam-baovaon'olon-tsotra manerantany manerana izao tontolo izao ary nantenainay ny handre vaovao avy aminareo ihany koa!
Jereo ny fandaharam-potoana momba ny hetsika .